ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Linux မှ
conys တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အခြားရွေးချယ်စရာ Cysboard
Luigys toro | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ
ဒီမှာဘလော့ဂ်မှာငါတို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ် ကွန်ကရစ်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုကြည့်ရှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ကိုတစ် ဦး ချင်းထိတွေ့စေသည့်အမြင်အာရုံအရာများထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့မင်းတို့အကြောင်းပြောချင်တယ် ဆင်ဆာ အရာတော်တော်လေးသည် Conky မှအခြားရွေးချယ်စရာအချို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုင်ထိုက်သောနှင့်အတူ။
1 Cysboard ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2 Cysboard ကိုမည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း။
ဆင်ဆာ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပါးသည့်စနစ်မော်နီတာ conky Que ဆင်တူ သင့်ခေါင်းစဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် html နှင့် css ကိုသုံးပါ။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ system နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများရှိပြီး CPU ၏အမည်မှသည် ram memory စာရင်းအထိကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ပမာဏအထိရှိသည်။
ဆင်ဆာ open source, C ++, html နှင့် css မှတီထွင်ခဲ့သည် မိုက်ကယ်အိုစီ၎င်းသည် html နှင့် css ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်စရာအလွန်နည်းသည်။ Monitor အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်သည်။
Cysboard ကိုမည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း။
Cysboard ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် app github system ၏သတင်းအချက်အလက်ကိုကိုယ်စားပြုသော identifiers ပါ ၀ င်သည့်ဇယားတစ်ခုရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အခြေခံ html ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူဥပမာသေးငယ်စွာပြသထားပါသည်။
cmake> = 3.1 နှင့် gcc> = 5.4 ဖြစ်သောလိုအပ်သောမှီခိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားရမည်။
ဒီ tool ၏တရားဝင် repository ကို Clone
Main directory ကိုသွားပြီး compile လုပ်ပါ
$ cd Cysboard / $ mkdir သည် $ cmake ကိုတည်ဆောက်သည်။ $ လုပ်ပါ
cysboard ကို run ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အခင်းအကျင်းများ cysboard ကိုဖန်တီးရန်၎င်းသည် developer မှဖော်ပြသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
~ / .config / cysboard / တွင် main.html ဟုခေါ်သောခေါင်းစဉ်အတွက်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
system အချက်အလက်များကိုသင်၏ github တွင်တွေ့ရသောဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့် identifier မဆိုနှင့် html ကုဒ်ကိုထည့်ပါ။
cysboard ကို run ပါ။
သံသယမရှိပါက၎င်းသည် conky နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် html နှင့် css ၏အခြေခံဗဟုသုတနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အပြီးသတ်အောင်မြင်မှုရရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကိုစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » conys တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အခြားရွေးချယ်စရာ Cysboard
ဝိုး !!! အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
Conky မရှိတော့ပါ ... ?
ယခုမှာငါသည် Conky အလွန်သာလွန်ကြည့်ပါ ...
အာမန်ဒို အီဘာရာ ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်သင်လိုချင်သောအရာပေါ်တွင် မူတည်၍ xmobar, lemonbar သို့မဟုတ် dzen2 နှင့် conky ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ငါကွဲပြားသောစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသို့မဟုတ်ဥပမာ xmobar ဘားအတွက် tool တစ်ခုစီကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်တစ်ခုတည်းနှင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်သည်ထက်အရင်းအမြစ်များလျော့နည်းသည်။
Armando Ibarra ကိုစာပြန်ပါ
Ubuntu, Lubuntu, Linux Mint စသည်တို့စသည်တို့တွင် rekitories တွင် grekllm သည်၎င်းထက် ပို၍ ပြီးပြည့်စုံပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ငါ Gkrellm ဆိုတဲ့နာမည်ကမှားတယ်
Starcraft ကို Linux တွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပုံ
Rclone - ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတိမ်များအကြားစည်းညှိရန်ခွင့်ပြုသည်